Sunday August 25, 2019 - 12:18:09 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Xukuumadda Washington ayaa sare uqaadday taageerada ay siinayso dowladaha duullaanka gardarrada ah kusoo qaaday dalka Soomaaliya waqti maamulka Trump uu duqeymo dad badan ku dhinteen oo ka geysanayo koonfurta iyo bartamah dalka.
Sirdoonnada dowladaha Mareykanka iyo Itoobiya ayaa sheegay in ay iska kaashan doonaan dagaalka ka dhanka ah waxa loogu yeero Argagaxisada xilli iskaashiga ka dhaxeeya labada dhinac ee ka dhanka ah muslimiinta uu sii xoogeystay.
Dowladda Xabashida Itoobiya iyo Mareykanka ayaa kala saxiixday heshiis lagu wadaagayo xogta laga soo aruuriyo muslimiinta Soomaaliya iyagoo marmarsiimo ka dhiganaya la dagaallanka waxa ay ugu yeereen Argagixisada.
War ay si wadajir ah usoo saareen sirdoonnada Itoobiya iyo Mareykanka ayay ku sheegeen in ay iska kaashan doonaan wadaagidda macluumaadyada dhanka wardoonka ah si ay uga gaashaantaan suurtagalnimada weeraro jihaadi ah oo Al Shabaab ay ku beegsato danaha labadan dowladood.
Mas'uul American ah ayaa xaqiijiyay in Itoobiya ay ka gacan siinayaan waxaan afka qalaad lagu yiraah "Terrorist Screaning Information" balse faah faahin dheeri ah kama bixin qaabka ay labadan dhinac isaga kaashanayaan dagaalka ka socda dalka Soomaaliya.
Warbaahinta Mareykanka ayaa heshiiska nuuciisa ku sheegay mid is Afgarasho ah oo aan gaarsiisneyn mid wada shaqeyn qota dheer ah, dhanka Maraykanka waxaa heshiiska u saxiixay kaaliyaha Agaasimaha guddiga baaritaanka Federaalka (Federal Investigation Berue ) iyo Agaasimaha xarunta aruurinta xogta la xariirta argagixisada ee Maraykanka ( Terrorist Screaning Center). Charles H. Kable.
Dhinaca dowladda Xabashida Itoobiya waxaa heshiiska u saxiixay Agaasimaha guud ee hay'ada Sirdoonka ninka lagu magacaabo Demelash Gebremichael, waxaa xusid mudan in saraakiil American ah ay ka barbar shaqeeyaan kumanaan askar Itoobiyaan ah oo duullaan ku jooga gobollo dhaca Koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya.
Dowladda Mareykanka ayaa falal dambiyeedyada ay ka geysanayo dalka Soomaaliya waxay gabaad uga dhigataa in bariga Afriga Afrika ay ka ilaalinayso weerarada Al Qaacidda.